Paositry ny polisy iray, sekoly tsy miankina roa ary Epp iray niampy trano fivoahana no vita. Tao amin’ny kaominina Ambatoboeny no nanokanana azy ireo. Ankoatra izay, tao amin’ny fokontany Mangakely tao amin’ity distrika ity ihany, dia nahazo efitrano sekoly roa niampy efitra fianarana informatika ny tao amin’ity fokontany ity. Nivaly avokoa ny ankamaroan’ny fangatahan’ny mponina tao amin’ireo fokontany sy kaominina ireo. Tonga nitokana ireo fotondrafitrasa ireo ny lehiben’ny faritra mpisolo toerana, ny Ben’ny tanànan’Ambatoboeny, ny prefen’i Mahajanga, natrehan’ireo sivily sy miaramila tany an-toerana. Samy naneho ny hafaliany avokoa ireo vahoaka nahazo izao fotodrafitrasa izao, hoy ny fanazavana. Nahazo vahana ary nirongatra tao amin’io distrika io ny asan-jiolahy isan-karazany, ka nanolorana izao paositry ny polisy izao. Nampitomboina ihany koa ny isan’ny mpitandro ny filaminana hiasa any an-toerana ary hanao fisafoana ny faritra mafana sy hanjakan’izay asan-dahalo izay.